Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » श्रममन्त्रीबाट गोकर्ण विष्ट हटाउदा म्यानपावर व्यवसायी खुशी, श्रमिकको आक्रोश !
श्रममन्त्रीबाट गोकर्ण विष्ट हटाउदा म्यानपावर व्यवसायी खुशी, श्रमिकको आक्रोश !
मंसिर ५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई पदबाट हटाएका छन् । विष्टलाई पदबाट हटाइएपछि सामाजिक संजालमा उनको बारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै चर्चा परिचर्चा शुरु हुन थालेको छ ।
विष्टलाई श्रममन्त्रीबाट हटाएर रामेश्वर राय यादवलाई श्रममन्त्रीको नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ । २०७४ चैत्र २ गते श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रममन्त्री विष्टले २१ महिना श्रम मन्त्रालयमा नै बिताए । यस अवधिमा श्रम क्षेत्रमा देखिने केहि राम्रा काम गरेर ऊनी बाहिरिएका छन् ।
ओझेलमा परेको श्रम क्षेत्रलाई मुलधारमा ल्याउन उनले केहि प्रयास गरे, जसले गर्दा आजपनि उनलाई प्रशंशा गर्नेहरु निकै रहेका छन् साथमा उनको विरुद्धमा लाग्नेहरुको सुची पनि लामै रहेको छ । उनको कार्यकालमा आन्तरिक रोजगारी र बैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारसंगै व्यवस्थापकीय सुधार भएका नभएका होइनन् ।
आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामलाई लिएर म्यानपावर व्यवसायीले खुसियाली मनाएका छन् श्रमिक वर्गले सुधारको आशा समाप्त भएको जनाएका छन् । अरुलाई सिसाको घरमा बसेर धेरै नबोल्नुस भन्नेहरूको घरपनि सिसाकै हुँदो रहेछ कठै भन्दै एक म्यानपावर व्यवसायीले सामाजिक संजालमा लेखेकी छिन् ।
तर कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले राम्रै नजरले पने हेर्ने गरेका छन् । एक व्यवसायीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ‘श्रम मन्त्री बिष्ट असल नियतका थिए । श्रममा नीतिगत रुपमा असल निर्णय भएका थिए, श्रमिकका पक्षमा भएका थिए । त्यसलाई म्यानपावर ब्यवसायीले मन पराएनन् र संघमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि चुनाबमा आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारलाई हराए । अन्तत मन्त्री आफैँ साईड लागे । दलालहरुको शक्ति अदम्य छ ।’
‘असल र इमान्दारहरुलाई जहाँ पनि धेरै टिक्न दिइदैन यो नेपाली विशेषता नै हो दु:खद कुरा’ भन्दै समर्पण भट्टराईले लेखेका छन् । गोकर्ण विष्टले नेपाली जनताको लागि केही सकारात्मक राम्रो काम गरेका थिए बेग श्रेष्ठले लेखेका छन् ‘दलाल माफियाहरुलाई ठगीमा सहजताको लागि गोकर्ण बिस्टलाई हटाइ छाडे । जनताको लागि केही राम्रो काम गरेको देख्ने नसहने राजनीतिक नेतृत्वको चाल देखियो।’
धबार साँझ नियुक्त भएका नयाँ मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्।
सपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति रहेको भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आजै पदभार ग्रहण गर्नेछन्।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा र कृषि राज्यमन्त्री राजकुमारी चौधरीलाई हटाइएको छ।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्री बनाइएको छ। कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।